Iingcebiso zokuhamba ngeeNtambo zeNtaba eziKhuselekileyo ngokukhuselekileyo
... Ngokuchasene nokuwa
Ukunyuka kweentaba kuyimingeni ecacileyo, kodwa ukuhamba emanzini ... kulula. Kunene? Hayi njalo. Ukunyuka kweepestile kuyamnandi kwaye kulula ngokwaneleyo ukuba unako ukuonwabela izinto ezibonakalayo - kodwa inzala ephezulu, okanye kwintsika encinane kwimimandla emigxobhozo, idinga uxinzelelo olupheleleyo.
Iingcebiso zokunyuka kweNtaba
Nazi iindlela zam ozithandayo zokuhamba ngokukhuselekileyo phantsi kweentlambo ezinqabileyo. Ziziphi ezizisebenzisayo ziya kuxhomekeka kumandla akho, ubuchule kunye namanqanaba okuthuthuzelayo, kwaye nakwii-slope uxoxisana ngazo.
Khumbula: Ukuba awuqinisekanga ukuba ungehla ngokukhuselekileyo, khangela indlela elula ngeenxa zonke - okanye ungenyuki kwindawo yokuqala!
Indlela elula kakhulu yokwenza ubuhlungu xa uhamba ukuhla kwebala ukukhawuleza-ke ungabi! Ziyeke ixesha elininzi lokuhla ngezinga elifanelekileyo ngaphambi kokuba kube mnyama, nokuba oko kuthetha ukuguquka kusasa. (Kodwa unomkhwa wesikhokelo sakho esiphuthumayo xa kunjalo, kunjalo?)
Ndiyathemba ukuba uhla ngendlela efanayo naleyo oyenayo, ngoko ke ubuncinane beqhelana nomhlaba oza kuwufihla. Sekunjalo, gcina iliso kwizingozi onokungazifumananga ngendlela eya phezulu - ngokunyanisekileyo okanye ngokungazinzanga, ngokukodwa xa kusemhlabeni apho ukuwa kunokuba nemiphumo emibi.
Ukuba kukho enye imfihlelo yokuhla ekhuselekileyo umthamo, ugcina ubunzima bakho bujoliswe kwindawo yakho yokuqhagamshelana nomhlaba. (Isicatshulwa: Phantse njalo iinyawo zakho!)
I-low your center ibhalansi (oko kukuthi uguqa amadolo akho), uzinzile ngakumbi - kwaye kulula ukuba uzivumele "ukuwa" ekukhuphukeni, ukuba kufuneka, njengemfuneko yokugqibela ukukhusela intloko yokuqala ukuwa kwehla. (Kodwa oko akuyi kwenzeka ngenxa yokuba uya kufunda zonke izicwangciso kwaye usebenzise ukulumkela okufanelekileyo xa uhamba ngehla.
Thatha amanyathelo amancinci
Ukuthabatha amanyathelo amancinci kwenza kube lula kuwe ukuba uhlale ucala phezu kweenyawo zakho, kwaye kwenza kube lula ukufumana kwakhona xa usonga okanye ulahlekelwa ngumlinganiselo wakho. Ukuthatha amanyathelo amancinci uvakalelwa kakhulu kunokuba ukhuphe ukuhla kwehla ngoba ... kakuhle ... kunjalo!
Kulula kakhulu ukugcina ukulawula ngelixa uhamba ngeendawo zokutshintshela - oko kukuthi, ukugoba kunye nokugqithisa ngaphesheya kobuso bentlambo, ngokukhawuleza ukulahlekelwa ukuphakama kwepasipoti nganye - kunokugqithisa ibhokhwe ekuqaleni kwehla. Iindlela ezininzi ezikhethiweyo ezicwangcisiweyo ezikulo mhlaba ziza kuba neendawo zokutshintshwa kuzo.
Nangona umzila ongenawo umgca ongenayo i-switchbacks, ungenza i-mini-switchbacks yakho nge-zig-zagging emva nangaphezulu ngaphaya kobubanzi bendlela okanye ihlombe lomzila.
Maxa wambi ama-switchbacks ayilona khetho (okanye usenokuziva ukhulule / ushicilela ngokwaneleyo ukuba ufuna ukulumkisa okongezelelweyo). Ngaloo ndlela, ukujikeleza kwinqanaba ngaphantsi komzila kuyindlela efanelekileyo.
Xa ndenza oku, iinyawo zam zikhomba ngaphaya komzila kunokuba zilungele kwaye zisezantsi, kwaye ndiwaguqa ngamadolo ukuze ndikwazi ngamabomu "ipakeki" emnqubeni ongaphezu kwam, endaweni yokuwa phantsi, ukuba kwenzeka ntoni ukuba ndinqabile. Ngokuqhelekileyo, ndiza kuhlahla ngokwaneleyo ukuze ndinokusebenzisa izandla zam ukufumana ibhalansi.
( Qaphela: Qinisekisa ukuba uqonda umahluko phakathi kokuhamba kwinqanaba elisezantsi, ngokuchasene nokuzama ukunyuka ukunyuka kobuchwephesha.
Gcinana noQhagamshelwano olupheleleyo
Ukuba ama-switchback ayilona khetho (okanye ukuba ukhetha ukuthatha inqutshane, inzala ephantsi), ungazama ukutshintsha iinyawo zakho - ngamanye amagama, ukukhomba iinzwane zakho - njengoko uhamba ukuhla. Andiyathethi ukuhamba emanqeni kwizwane zakho; Ndiyathetha ukugcina yonke intambo yesihlangu sakho kudibanisa nomhlaba njengoko iinzwane zakho zithe zahla.
Gcina iItyeli zakho
Ukuba uhla ehlabathini elithambileyo - ngokuqhelekileyo iqhwa okanye ukukrabalaza - ukujongana nokukhaba izithende zakho ekuthambekeni xa uhla ungakunika indawo engcono.
Ukuba uziva unganakali okanye unxungule ngokuwa "ngaphandle" (ukuhla kwehla), zama ukujongana nayo.
Oku kwenza izinto ezimbalwa:
Yenza kube lula kuwe ukuba uwele emthambekeni, ngokuchasene nayo
Yenza kube lula kuwe ukuba ubambelele kwiindawo ezinamandla zokufumana ibhalansi
Yenza kube lula kuwe ukuba uncike kwi-slope, e-kuxhomekeke kwiimeko-kunokukwenza uzive ukhuselekile ngakumbi.
Kwi-downside, ejongene nayo yenza kube nzima ukubona apho uza kufaka khona iinyawo zakho ngokulandelayo. Ngoko oku akusoloko isisombululo esihle, kodwa ngokuqinisekileyo sixhobo esikhulu sokugcina engqondweni.
Ngoko wenzenjani ukuba ufuna ukukhuseleka kokusebenzisa izandla kunye neenyawo zakho ukuzinceda phantsi kwethambeka, kodwa kusenokwenzeka ukuba ukwazi ukubona apho uya khona? Ubhekane kwaye uphawule-uhambe phantsi ezandleni zakho nasezinyaweni okanye uhlale kwi-butt yakho ngelixa ufumana iinyawo zakho kwisithuba kwisinyathelo esilandelayo.
Yandisa iiPolisi zakho
Ngaba uphethe iiplanga? Zingaba luncedo olukhulu lokugcina ibhalansi yakho entanjeni ephantsi, nangona andiyikucebisa ukuphumla kwakho ubunzima bonke kubo. Ukuba uphethe izibonda zokuhamba, unokuzinwebisa ukuze umzimba wakho uhlale ulungelelaniswe kakuhle xa uhla.
Ukuthatha izibonda zokunyuka ingaba ngumthwalo, nokuba kunjalo, ukuba ufuna i-hands-free yakho, ke qiniseka ukuba wazi ukubeka iipali zakho xa ungazidingi .
I-Pool echanekileyo - Iingcebiso zokuPhucula okuPhuculo
Ukulayisha i-DLL kwi-Resource ngqo kwiNkumbulo kwi-Applications Delphi
Yintoni ongayenza Ukuba iKoloji yaseKholeji isebenzisa iziThuthi zakho
Yintoni iCarnauba Wax?
Imibuzo Ephakamileyo njengeFom yePhulo
10 Amazwi NgamaToltec aseMandulo
IiNkcazo zeeNqwelo zeeKhaphu eziKhuselekileyo kunye noKhuselo lweMimoya yeNdawo
Ubume beCaptain William Kidd
Yintoni ephosakeleyo kunye nokuHluma kwezilwanyana kumazwe oLuntu?
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "uhambo lokuhamba" (ukuhamba)
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala zaseMalnland